Vulkan 1.2.162: ichaunza rutsigiro rweRay Tracing | Linux Vakapindwa muropa
Vulkan 1.2.162: ichaunza rutsigiro rweRay Tracing
Isaac | | Graphics, Linux Mitambo
El Ray achitevera rava rinenge monothem munyika yemifananidzo. Uye haisi yepasi, nzira iyi inobvumidza kuvandudza zvakanyanya kutaridzika kwekuonekwa kwemitambo yemavhidhiyo. Uye makadhi emifananidzo azvino uno, ese ari maviri kubva ku AMD neNVIDIA, anoitsigira kuti ifadze vatambi vazhinji vane zvishandiso zvazvino. Parizvino, DirectX ndiyo yaive "nemhanza" yekuitsigira, asi… ko Vulkan?
Zvakanaka, iyo yakavhurika sosi yakavhurwa graphical API ichave iinewo Ray Kutsvaga rutsigiro. Ichauya pamwe nekutanga kweiyo Vulkan vhezheni 1.2.162. Nekudaro, vese vadikani vemitambo vanogona kuvimba nekuvandudzwa uku mumitambo yemavhidhiyo isina kugadzirirwa kushanda neMicrosoft API.
Izvi zvakaziviswa zviri pamutemo Khoronos Boka. Nyowani Ray Kutsvaga akawedzeredzwa eVulkan anosvika, pamwe navo vachimhanyisa muchinjika-chikuva ray yekutsvaga. Pamwe pamwe nekuburitswa uku kunouya matsva matsva akadai se:
Nhanho hombe kumberi yeiyo Vulkan mifananidzo API iyo inopinda mumitambo yemavhidhiyo nayo mamiriro-e-iyo-mifananidzo mifananidzo anokwanisa kutsigira Ray Kutsvaga. Naizvozvo, Linux, macOS uye Windows masisitimu anokwanisa kunakirwa neiyi tekinoroji, pamwe neiyo AMD, NVIDIA uye Intel machipisi ane rutsigiro rwehardware.
En LinuxKusvika parizvino, Ray Tracing inogona kushandiswa kushandisa zvinowedzeredzwa neNVIDIA, asi chete yemakadhi ayo emifananidzo. Naizvozvo, yaive yakaganhurirwa kune vazhinji vashandisi.
Kana uchifarira Dzidza ZVIMWE, NVIDIA yakaburitsa Vulkan Beta Mutyairi 455.46.02 kutsigira izvi zvinowedzerwa, pamwe neNsight Graphics chishandiso mune yayo vhezheni 2020.6. Intel haizove nerutsigiro rwehardware kusvika 2021, nekuuya kweiyo yakatsaurwa Xe-HPG GPUs. Uye AMD, vatove nemutyairi akagadzirira Windows, asi havasati vazoita yavo yeRadeon software yeLinux munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Vulkan 1.2.162: ichaunza rutsigiro rweRay Tracing
Akanaka Matema eChishanu Deals - Mhanya Vasati Vatengesa!
Armbian 20.11 Tamandua anosvika neKernel 5.9 uye nezvimwe